သန္ဓေတားဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ ပေါင်းစပ်သန္ဓေတား သောက်ဆေး
၁.၅ ပေါင်းစပ် သန္ဒေတားဆေး ကို အသုံးပြုရန် သင့်တော်သူများ
၁.၆ ပေါင်းစပ်သန္ဓေတား သောက်ဆေးကဒ်အသစ်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်သောက်
ပေါင်းစပ်သန္ဓေတားသောက်ဆေးဆိုသည်မှာ ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးဖြစ်သော အီစထရိုဂျင်နှင့် ပရိုဂျက်စတင်တို့ ပမာဏအနည်းငယ်စီပါဝင်သော ဆေးလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းဆေးတွင်ပါဝင်သောဟော်မုန်းများသည် အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်ခန္ဓာရှိ သဘာဝထုတ်လုပ်မှုနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
•	တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ရမည်။ အကောင်းဆုံးထိရောက်မှုကို ရရှိစေရန်အတွက် တစ်နေ့တစ်လုံးမှန်မှန်သောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အသစ်ထပ်သောက်ရမည့်ဆေးကပ်ကိုလည်း အချိန်မှီပြန်သောက်ရမည်။
•	သွေးဆင်းမှုအပြောင်းအလဲသည် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်း အန္တရာယ်မရှိပါ။ ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲသူတစ်ဦးအတွက် သုံးစွဲစ လအနည်းငယ်အတွင်း မူမမှန်သွေးဆင်းမှုဖြစ်တတ်သော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် သွေးဆင်းမှုနည်းလာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပုံမှန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
•	ဆေးသောက်ရန်မေ့သွားလျှင် သတိရသည်နှင့်ချက်ချင်းအမြန်ပြန်သောက်ရမည်။ ဆေးသောက်ရန်မေ့ပါက ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုကျိုးများပိုမိုဆိုးဝါးပါလိမ့်မည်။
•	ပေါင်းစပ်သန္ဓေတားဆေးအား အချိန်မရွေးပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်မရှိကြောင်းမသေချာပါက အမျိုးသမီး ၏နောက်တစ်ခေါက်ရာသီစလာသောနေ့တွင် စတင်ဆေးတိုက်နိုင်သည်။
(COCs) သည် သားဥအိမ်မှ မျိုးဥထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးပေးသည်။ သားဥမရှိလျှင် အမျိုးသမီး သည် ကိုယ်ဝန်မရရှိနိုင်ပေ။ ကိုယ်ဝန်မကပ်စေရန် တစ်နေ့တစ်လုံး မှန်မှန်သောက်ရမည်။
သို့ရာတွင် ပေါင်းစပ်သန္ဓေတားသောက်ဆေးသည် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ယေဘုယအားဖြင့် (COCs) ကို တစ်နှစ်သုံးစွဲသော အမျိုးသမီးဦးရေ (၁၀ဝ)၌ (၈) ဦးတွင် ကိုယ်ဝန်ရရှိ ကြသည်။ သို့သော် (COCs) ကို နေ့စဉ်မှန်မှန်တိတိကျကျ(မေ့သွားခြင်း မရှိပဲ) သောက်သုံးသော သူ၁၀၀ တွင်မူကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်ခြေမှာ တစ်ယောက်အောက်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မှန်ကန်စွာသုံးစွဲလျှင်လွန်စွာထိရောက်၍ မှန်မှန်မသောက်သုံးလျှင် ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်မှု မှာ ပိုမိုမြင့်မားလေသည်။
ပေါင်းစပ် သန္ဒေတားဆေး ကို အသုံးပြုရန် သင့်တော်သူများ[ပြင်ဆင်ရန်]
•	ထိရောက်ပြီး ကလေး ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို နှစ်သက်သည့် အမျိုးသမီးများနှင့် စုံတွဲများ
•	ကလေးမမွေးဖူးသော အမျိုးသမီးများ
•	ရာသီသွေးများစွာဆင်းသောကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါ ခံစားနေရသော အမျိုးသမီးများ
•	ရာသီစက်ဝန်း ပုံမှန်မရှိသော အမျိုးသမီးများ
•	သားအိမ်အပြင်ဘက်တွင် သန္ဓေတည်သည့် ရာဇဝင်ရှိဖူးသော အမျိုးသမီးများ
•	မိသားစုသားအိမ်ကင်ဆာ ရာဇဝင်ရှိသောသူ သို့မဟုတ်ကုသ၍ရနိုင်သော သားဥအိမ်အတွင်း အရည်အိတ်များဖြစ်ဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ
ပေါင်းစပ်သန္ဓေတား သောက်ဆေးကဒ်အသစ်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်သောက်[ပြင်ဆင်ရန်]
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ပုံမှန်ရာသီသွေးဆင်းနေပြီး သန္ဓေတားနည်းတမျိုးမျိုးကို သုံးစွဲနေခြင်းမရှိက ပေါင်းစပ်သန္ဓေတားသောက်ဆေးကို အောက်ပါအတိုင်းသုံးစွဲနိုင်သည်။
1.	ရာသီသွေးစဆင်းပြီး ၅ ရက်အတွင်း စတင်သောက်သုံးနိုင်သည်။
2.	အခြားနေ့များတွင်စသုံးပါက သုံးစွဲနေသည့် ပထမ ၇ ရက်အတွင်း အရန်တားဆက်ခြားနည်းတစ်မျိုးမျိုးကို သုံးသင့်ပါသည်။
3.	နောက်လ ရာသီလာသည့်အချိန်တွင်မှစသောက်မည်ဆိုလျှင်- ပေါင်းစပ်သန္ဓေတားသောက်ဆေး စသောက်သည့်အချိန်အထိ အရန်နည်းတစ်မျိုးမျိုးကို သုံးစွဲရပါမည်။
လေ့လာချက်များအရ ပေါင်းစပ်သန္ဓေတားဆေးသည် သန္ဓေတားရုံသာမကဘဲ ကျန်းမာရေးအရ သိသာသော အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးနိုင်သည်။ ဤဆေးသည် အောက်ဖော်ပြပါရောဂါများနှင့် မူမမှန်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို လျော့နည်းစေသည်။ •	သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ခြင်း
•	ကုသ၍ရသော ရင်သားအလုံးအကျိတ်ရောဂါများ
•	လစဉ်ရာသီသွေးဆင်းလွန်ခြင်းနှင့် ၎င်းဆက်နွယ်သော သွေးအားနည်းရောဂါ
•	လစဉ်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်သော ဗိုက်နာ၊ ဗိုက်အောင့် မအီမသာဖြစ်ခြင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သန္ဓေတားဆေး&oldid=696534" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။